ဇူလိုင်လ 2017 - စာမျက်နှာ 10 - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2017 » ဇူလိုင်လ (စာမျက်နှာ 10)
အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လျှောက်လွှာကယောဘအပေါ်ရှိနိုင် avid အွန်လိုင်းအယ်ဒီတာများကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်နို့ဗိုင်း, Duration: လုပ်နေဆဲလစာအမျိုးသားရေးထုတ်လွှင့်ကုမ္ပဏီအတွက် onlined နဲ့ Scope ကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ရှိသည်ဟုဖြစ်ရမည်။ ယခုပင်လျှင်အသေးစိတ်တစ်ဦးစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအတွက်ယခု Subscribe? >> ပိုအတွက် Sign ကျေးဇူးပြု.
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဂရင်းဗိုင်း, SC Duration: 1 နေ့က -7/ 26 / 168 အပေါ် posted 07 / 24 လစာ $ 17 + မိုင်အကွာအဝေးယောဘသည် 07 / 26 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply ငါ 1 ငှားရမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား PA ဆိုပြီးအဆိုပါဂရင်းဗိုင်း, SC ဧရိယာထဲမှာပစ်ကပ် 1 အလားအလာပါဝင်သူဖို့နဲ့တစ်ဦး DRs ဖို့နဲ့မှသူတို့ကိုယူပါ။ 45 မိအကြောင်းကိုချိန်း ...
မိုဃ်းလင်းနှင့်မွန်းတည့် Editor ကို / ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်
07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်မိုဃ်းလင်းနှင့်မွန်းတည့် Editor ကို / ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Harrisonburg, VA သို့ Duration: ပေးမလစာပေးမယောဘကိုကျနော်တို့သောကြာနေ့မိုဃ်းလင်းမှတဆင့်တနင်္လာနေ့အချိန်ပြည့်အဘို့အကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုလက်ခံခြင်းနှင့်နေသောအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံနက်များနှင့်မွန်းတည်ထိပ်တန်းသတင်းတည်းဖြတ်ရန်မွန်းတည်အယ်ဒီတာ / PHOTJOURNALIST ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကွန်ပျူတာများနှင့်အတူကောင်းမကောင်းအောက်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ...
motion ဒီဇိုင်နာ / Illustrator
လျှောက်လွှာကိုယောဘတွင် motion ဒီဇိုင်နာ / Illustrator ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Redmond, WA Duration: Freelance လစာ 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကျနော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရိတ် client များနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ဒေသခံ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရွေ့လျားမှုဒီဇိုင်နာများနှင့် Illustrator ရှာကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား သာ. Seattle နှင့် Eastside ဒေသများ။ ကျွန်တော်တို့သည်အပုံဥပမာအလွန်အမင်းကျွမ်းကျင်အတွေ့အကြုံရှိနှင့်စွယ်စုံလွတ်ရှာကြသည် ...
အလင်းရောင်အထူးကု: Gaffers & ချုပ်ကိုင်ထား
အလင်းရောင်အထူးကု: 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်လျှောက်လွှာကိုယောဘတွင် Gaffers & ချုပ်ကိုင်ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Seattle, WA Duration: Freelance လစာဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးအလင်းရောင်အထူးကုရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်စွမ်းရည် in ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုအညွန့်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူ Gaffers နှင့်ချုပ်ကိုင်ရှာကြသည်။ ကော်ပိုရိတ်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ပေါင်းတွေ့ကြုံခံစား! ဤလုပ်ငန်းကို ...
ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအထွေထွေ
ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအထွေထွေကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Redmond, WA Duration: Freelance လစာ application ကိုယောဘသည်တွင် 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကျနော်တို့စီမံကိန်းကိုလိုအပ်နှုန်းကိုထောကျပံ့ဖို့ကောင်းစွာ-rounded ထုတ်လုပ်မှုအထွေထွေရှာကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ; စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းထံမှအကြားတိုက်ရိုက်, ပြင်ဆင်ရန်နှင့်အရာခပ်သိမ်း,, ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ် shoot နိုင်တော့မည်, ထုတ်လုပ်ရန်ပါလိမ့်မယ် ...
ထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Seattle, လျှောက်လွှာယောဘသည်တွင် WA Duration: အချိန်ပြည့်လစာအရည်အချင်းပြည့်, လှုံ့ဆော်မှုအလွတ်တန်း-to-အလားအလာအပြည့်အဝအချိန်ထုတ်လုပ်သူများရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ နှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်, webcasts နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ - လောလောဆယ်လိုင်းအတွေ့အကြုံရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်, ရုပ်ရှင် / ဗီဒီယို, နှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ / အသံ post ကိုထုတ်လုပ်အတူစက်တင်ဘာ / အောက်တိုဘာလရရှိနိုင်ပါသည်ဒေသခံထုတ်လုပ်သူများရှာနေ။ ထုတ်လုပ်သူများနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ် ...
ကျားကန် stylist ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Seattle, WA Duration: Freelance လစာ application ကိုယောဘသည်တွင် 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည် RUN Studios ကတစ်စီမံကိန်းကိုနှုန်းအပေါ် အခြေခံ. အလုပ်လုပ် Freelance ကျားကန် stylist နှင့်ကျားကန်အကူအညီများလိုအပ်နေသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ဒေသအလိုက်ဆီယက်တဲလ်ဧရိယာနှင့်အနီးတဝိုက်။ အဆိုပါ Freelance ကျားကန် stylist ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အလုပ်လုပ်နှင့်ပေါ်ပါလိမ့်မယ် ...
ဓာတ်ပုံ Retoucher ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဘရွတ်ကလင်း, နယူးယော့ Duration: လစာ 20 $ / နာရီယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး 07 / 24 / 17 အပေါ် posted 08 / 25 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply အလုပ်အဓိက function Retouch, အရောင်မှန်ကန်သော, သီးနှံဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းဝေမျှမယ်မပေးထား ထောက်ပံ့စတိုင်လမ်းညွှန်အဆိုအရပုံရိပ်တွေကို Creative ဒါရိုက်တာကနေဦးတည်ချက်ကိုလက်ခံပြီးသည့်အခါလိုအပ်သောပြကွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသင်း / ပူးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းပြင်ဆင်ချက်လုပ်ဆောင် ...
ကြော်ငြာအရောင်းခဲ / CRO
ကြော်ငြာအရောင်းခဲ / CRO ကုမ္ပဏီအညွှန့် Connections ကိုစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: ... လစာ Equity 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက် www.sproutconnections အပေါ် posted (မျှ / အနိမ့် paid / ကော်မရှင်သာ) ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးဘူး။ အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်သင်မီဒီယာ, IoT နှင့်ကြော်ငြာတီထွင်ဆန်းသစ်သောက start-up, ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုသလား? တစ်ခုပြီးသားဒေါ်လာဘီလီယံစက်မှုလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သငျသညျခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိကြော်ငြာရောင်းအားများမှာ ...
အကြောင်းအရာသိမ်းယူမှုအထူးကုများနှင့် Marketing ကုမ္ပဏီအညွှန့် Connections ကိုစီးတီး, ပြည်နယ်က New York, NY Duration: ... 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက် www.sproutconnections အပေါ် posted လစာ Equity (မျှ / အနိမ့် paid / ကော်မရှင်သာ) ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးဘူး။ အလုပ်ကယောဘဖျေါပွခကျြအကြောင်းဝေမျှမယ် BingeWave အသင်းနှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်ဖျော်ဖြေရေးများ၏အနာဂတ်ဖန်တီးကူညီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာသိမ်းယူမှုအဖွဲ့ join ဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်မောင်းနှင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာဖွေနေသည်။ ဒါကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ...
Illustrator / Motion ဒီဇိုင်နာ
လျှောက်လွှာကိုယောဘတွင် Illustrator / Motion ဒီဇိုင်နာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Seattle, WA Duration: TBD လစာ 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ကိုကျနော်တို့နွေဦးနဲ့နွေရာသီရာသီတက်သည်ပြင်ဆင်ထားကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ ကျနော်တို့ပုံဥပမာ, ဒီဇိုင်းနှင့်ကာတွန်းထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားကျွမ်းကျင်အတွေ့အကြုံရှိနှင့်စွယ်စုံလွတ်ရှာကြသည်။ လိုအပ်ပံ့ပိုးပါဝင်နိုင်ပါသည်: * Concept ကိုဖွံ့ဖြိုးရေး, ဇာတ်လမ်း ...
Video Editor ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Redmond, WA Duration: TBD လစာ application ကိုယောဘသည်တွင် 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်တိုက်ရိုက်အရေးယူနှင့်ကာတွန်းဗီဒီယိုကိုစီမံကိန်းများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိအလွတ်တန်းကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများရှာအလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးဘူး။ Adobe Premiere တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်, မကြာသေးမီက reel သို့မဟုတ်မကြာသေးမီအလုပ်နမူနာဖို့ကျွန်တော်တို့ကို link တစ်ခုပေးပို့ရန်သေချာစေပါပါ။ ...
ဓာတ်ပုံဆရာ / ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် (ယာယီ / ဖြည့်-ခုနှစ်တွင်)
ဓာတ်ပုံဆရာ / ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် (ယာယီ / ဖြည့်-ခုနှစ်တွင်) ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် San Diego မှ,, CA Duration: ယာယီ / ဖြည့်-in ကိုလစာ 07 / 24 / 17 09 / 21 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့် Apply သည့်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမအပေါ် posted ယောဘကိုထောက်ပံ့ပေးမပေး ကျနော်တို့ယာယီရှာဖွေနေကြသည်အလုပ် / ဖြည့်ပါ-in ကိုတီဗီသတင်းဓာတ်ပုံဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်သော CBS နှင့် CW affiliates (ဖြစ်သော CBS သတင်း 8 နှင့် The CW San Diego မှ) သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာဖွေနေကြပါသည် ...
ထိပ်တန်းသတင်းဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ်ဟိုနိုလူလူ, HI Duration: အမြဲတမ်းလစာ TBD ယောဘကိုကျနော်တို့ထိပ်တန်းသတင်းဒါရိုက်တာရှာကြသည်အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ ထိပ်တန်းသတင်းတင်ဆက်မှု element တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် execute မှသတင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ တာဝန်ပေးအဖြစ်အခြားထုတ်လုပ်မှုနှင့်သတင်းကဏ္ဍအလုပ်အကိုင်များကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ စက်နှိုးသို့မဟုတ်အခြားအလိုအလျောက်စနစ်များနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ...
ဓာတ်ပုံရိုက်လေယာဉ်အမှုထမ်း / Assistant
လျှောက်လွှာကိုယောဘတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်လေယာဉ်အမှုထမ်း / Assistant ကုမ္ပဏီစာရင်းပေးသွင်းထားသူများသာစီးတီး, ပြည်နယ် Seattle, WA Duration: Freelance လစာ 07 / 24 / 17 ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးသင်္ဘောသား / ထုတ်လုပ်မှုရှာခြင်းနှင့်လက်ထောက် set အလုပ်အကြောင်းဝေမျှမယ်ပေးမ! ကျနော်တို့အထူးသတဲ့ professional ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဓာတ်ပုံကိုအညွန့်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူဓာတ်ပုံကိုလက်ထောက်, digitechs နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာကြ၏။ ရှိ ကျေးဇူးပြု. ...
10 ၏စာမျက်နှာ 45«ပထမဦးစွာ...«89101112	»	203040...နောက်ဆုံး»